9 तपाईको एसईओ ए बूस्ट दिन को लागि Semalt देखि अनिवार्य
वेब सँधै काममा आउँछ यदि अधिकांश सर्फिंग व्यक्ति Google (या कुनै अन्य खोज ईन्जिनियरिङ्) मा देखाउने परिणामहरूको पहिलो पृष्ठमा आफ्नो विकल्प सीमित गर्न चाहन्छन्। यस्तो रूपमा, तपाईंको कम्पनीलाई अर्ध एसईओ अभियान वा वेतन प्रति क्लिक विज्ञापनमा समावेश हुनुपर्दछ। यदि एसईओ ठीक छ भने, तपाइँ एक राम्रो स्तर निर्धारण को गारंटी दिईएको छ।
माइकल ब्राउन, ग्राहक सफलता प्रबंधक सेल्टल्ट , एसईओ रणनीति संग सहयोग गर्न सुझावहरु मा विस्तृत गर्दछ।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको वेबसाइट मोबाइल-अनुकूल छ
यात्रा गन्तव्यहरू र अन्य कार्यहरू खोज्नका लागि आफ्ना मोबाइल यन्त्रहरू प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। यो यो हो भने तपाईंको वेबसाइट कुनै पनि यन्त्रमा नेभिगेसन हुनु पर्छ - चाहे यो ल्याप्टप, मोबाइल फोन वा ट्याबलेट हो। Google को मोबाइल रैंकिंग कारकमा सूचित रहनुहोस्।
एक उत्तरदायी वेब डिजाइन प्रयोग गर्नुहोस्
पृष्ठ लोड गति घटाउनुहोस्
छोटो स्पर्श तत्वहरू जोगाउनुहोस्
पाठ फाइलहरू प्रयोग नगर्नुहोस्
फ्लैश एनीमेशन राख्नुहोस्
त्यहाँ कुनै अनावश्यक र घुसपैठ इन्टरनेसनल हुनुपर्दछ
कीवर्डको साथ रचनात्मक हुनुहोस्
आउनुहोस् यस उदाहरणलाई विचार गरौं: कोही पेरिस जान चाहन्छ। उनीहरूको यात्रा कहिले सुरु हुन्छ? के यो पेरिसमा खुट्टा सेट गर्दा हो? अवश्य पनि होइन। के तिनीहरू आफ्नो विमान बोर्ड गर्दा हो? गलत छ। त्यसोभए, उनीहरूले कसरी हवाईअन्तर्गत बाटोमा एक टैक्सी बोर्डमा राख्छन्? बन्द गर्नुहोस् तर बन्द नगर्नुहोस्। तिनीहरूको यात्राले उनीहरूलाई विचारलाई तुरुन्तै सुरू गर्छ। यसमा लगानी गर्न, यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ सबै भन्दा राम्रो कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्नुहोला। उदाहरणका लागि, लामो पूरै कुञ्जी शब्दहरू जस्तै "लन्डनमा होटल बुक गर्नुहोस्" वा "पेरिसदेखि लन्डनको विमान" गर्नुपर्छ। उच्च श्रेणीको लागि, विशिष्ट र सेवा खोजशब्दहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
सोशल मिडियाको लाभ उठाउनुहोस्
तपाईंको सेवाको प्रयोग गर्न मानिसहरूलाई तुल्याउन सामाजिक सञ्जालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। विश्वास गर्नुहोस् वा होइन, भिजुअल मिडिया र सोशल सञ्जालहरू बीच राम्रो समन्वय छ। यसको फायदा लिनुहोस्। HD पोस्ट गर्नुहोस्, तपाईंको सोशल मिडिया पृष्ठहरूमा सम्मोहक फोटोहरू।
ब्लग सुरू गर्नुहोस्
तपाइँसँग तपाइँको वेबसाइटमा लिङ्कहरू लिने तपाइँको ब्लग हो। स्टक फोटोहरूसँग मिलेर ताजा, व्यावहारिक सामग्री रचना गर्नुहोस्। सबैको रुचिलाई समात्न सक्ने केहि लेख्नुहोस्।
प्राधिकरण वेबसाइटहरू / ब्लगहरूको साथ लिङ्क गर्नुहोस्
यदि तपाईंको कम्पनीले ज्ञात र प्राधिकरण स्रोतहरूमा उल्लेख उल्लेख गर्दछ भने, त्यसपछि तपाइँ राम्रो व्यवसाय गर्नुहुनेछ।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको वेबसाइट सजिलै नेभिगेसन छ
यदि तपाईं सँग धेरै पृष्ठहरू छन् भने, त्यसपछि तिनीहरू सजिलै नेभिगेसन हुन् भनेर निश्चित गर्नुहोस्। विशेषज्ञहरू सिफारिस गर्छन् कि कुनै2पृष्ठहरू तीन क्लिकहरू भन्दा बढी हुनुपर्दछ। वास्तवमा, यो वर्ग र सामग्री को सब्सिडहरू समावेश गर्न एक महान विचार हुनेछ।
एक्लै फोटोहरू मात्र सोशल मिडियाको लागि आरक्षित हुँदैन। तपाइँको वेबसाइटमा भ्रामक अपील गर्नै पर्दछ। केवल पाठको तुलनामा तस्बिरहरू र भिडियोहरू राम्रो प्रभाव देखाउँछन्।
तपाईंको वेबसाइटको लागि स्कीमा मार्कअप भर्नुहोस्
स्कीमा मार्कअप सबैभन्दा लोकप्रिय विशेषता हो जुन जुन Google मा भयो। सौभाग्य देखि या दुर्भाग्यवश यो केवल खोजी परिणाम को पहिलो पेज मा रैंकिंग को लागि केवल काम गर्दछ। तपाईंको स्कीमा मार्कअप समीक्षाहरू, 5-तारा मूल्याङ्कनहरू, र तस्विरहरू प्याकेज गर्नुहोस्। यसले जादू गर्दछ।
तपाईंको प्रतिस्पर्धामा जासूस
प्रतिस्पर्धाहरूको समीक्षा गर्न टोली सेट अप गर्नुहोस्। तिनीहरूको रणनीतिहरू विश्लेषण गर्न वेब सीईओ जस्ता उपकरणहरू प्रयोग गरेर उनीहरूको वेबसाइटहरू विश्लेषण गर्न प्रयास गर्नुहोस्। पत्ता लगाउन प्रयास गर्नुहोस्:
तपाइँ कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुने किवर्डहरूको लागि रैंक
कुञ्जी डोमेनहरू तिनीहरू पछाडि फिर्ता लिन्छन्
उनीहरूको सबै गतिविधि सामाजिक सञ्जालमा
. Source - black and beige fascinator